Semalt Inotsanangura 5 Nhema Dzinokanganisa SEO Dhiyabhorosi
Kunyange zvazvo SEO maitiro anokurudzira kuzvidzivirira kuzvidzivirira uye kutsvaga kwemashure, iweuchashamisika zvimwe zvezvibereko zvinowanikwa apo unotsvaga izwi rokuti 'SEO'. Chaizvoizvo, Google inoshandisa automosuggests zvisina kunakainotsanangura zviri pedyo neshoko SEO. Izvi zvinotungamirira pakuziva kuti tsika iyi yakazviwanira mukurumbira wakaipa kunze uko - developing mobile web apps in Lebanon.
Zvechokwadi, SEO inofambisa automatic search engine bots uye spider kuti iwanepeji-peji, kutsanangura chinangwa chaicho chaicho uye chinangwa uye pakupedzisira chinyoresa zvarinotaura nezvemangwana anotevera nevanotsvaga. Iyi nzira yekugadzirisamapeji epawebhu anoita kuti zvive nyore uye zvakajeka kune vashandisi vekutsvaga uye injini yekutsvaga sezvo inogona kubudisa mitsva yekutsvaga yakakodzera yespecific search query.
Artem Abgarian, nyanzvi inotungamirira Semalt Digital Services, inotsanangura apo SEO ine mukurumbira wakaipa.
1. Unyolicited Emails
SEO semunda mutsva uye unokura wekuita unokwezva vanotanga nevadzidzi. Mukutsvaga bhizinesi, ava vanotanga kutsvaga makambani uye vanhu vanozivikanwa vane mazhinji emaimeri asina kukumbirwa anopedzisa kuparadzanisa mabhokisi avopavhiki nevhiki. Nzira iyo vazhinji vanozviti vave nyanzvi inovapa sevanhu vanonyengedza uye vanonyengera saka naizvozvo mukurumbira wakaipamumusika. Muzviitiko zvakawanda, emaimeri anovimbisa kugadzirisa matambudziko mazhinji kune makambani anotarisirwa kutenda. Izvo zvinoitikawo kuti zvimwe zveizvikuzvidzora kwekuti SEO nyanzvi ndezvechokwadi.
Shoko guru ndiro nheyo ye SEO. Shandisa zvakanaka uye kukohwa zvaunoda. Inruremekedzo rwakadaro, nechinangwa kana kuti nekusazvinyengedza kudzokorora uye kuisa zvinhu zvinyorwa zvekutora mhinduro yekutsvaga migumisiro yezvikwereti zvakakura uye zvinokuvadzachinangwa chokutora SEO. Shoko rako rekutsvaga kwechinyorwa chinofanira kunge rakanyatsonaka sezvaunokwana kuti uwane nzvimbo yakanaka uye udzivise achirango kubva kutsvaga injini.
3. Cloaking uye Doorway Mapeji
Izvi zvinoshandiswa pakubereka zvinosanganisira kushandiswa kwemashoko eIndaneti pane zvarinodaimwe nheyo nechinangwa chekushandisa kuronga nekuisa. Kamwe kana munhu anoshandisa pakanamatira kana peji, anonyorerwa kune mumwe asingabatsiriwebhusaiti yehuwandu hwehuwandu hwezvinyorwa zvavanoshandiswa kuti vafambise migwagwa pawebsite yekutanga. Mashizha uye mapeji emasuo maitirozvinokanganisa zvose mushandisi uye injini yekutsvaga naizvozvo zvichiita kuti zita rakashata.
4. Trading Links
Isu tose tinoziva simba re SEO rine e-commerce. Vadzidzisi vepaIndaneti uye vashandi veSeOvanoziva kukosha kwekubatanidza simba iri saka vanoita kuti tive netsika dzakadai sekutenga kuwirirana kushandisa nzvimbo yekutsvaga pamibvunzo yekutsvaga. Izvi zvinosanganiswakunyengedza kupfurikidza nekutsvaga injini kuburikidza nekugadzira simba repamusoro pepaji pasina kuziva. Asi zvakadaro, injini dzakadaro dzakadai seGooglekubata nemuitiro uyu uye kuisa zvikwereti zvakakura pamhosva.
5. Hidden Content and Links
Nzira yakangwara uye inonyengera inoshandiswa kuvanza kana kuratidza zvinyorwa zvakasiyana kubva paneiyo inoshandiswa navashandisi. Inonyatsozivikanwa sechinyorwa chiri shure kwechifananidzo kana mutsvuku mutsvuku. Vatendi vechokwadi uye vanorumbidzwa SEO ndivohazvibviri kushandisa shanduro iyi kunyange zvazvo ichiri kuwanzana uye inogadzirisa SEO mukurumbira.
Maindasitiri ose anoona uye anotarisana nematambudziko ane chokuita nemaitiro. TheSEO chikwata chiri kupindura uye kugamuchira tsika dzisina tsika maererano nekudaro.